R/wasaare Khayre : Xukuumadihii Hore deymihii ay galeen ayaan bixinay oo maanta. – Kismaayo24 News Agency
R/wasaare Khayre : Xukuumadihii Hore deymihii ay galeen ayaan bixinay oo maanta.
by admin 5th April 2019 067
Xasan Cali Kheyre Raysal wasaaraha Soomaaliya ayaa ka hadlay kororka dhaqaalaha soo gala dowladda Soomaaliya iyo hoos u dhaca deymo uu sheegay in lagu lahaa dowladda Soomaaliya, Wuxuuna Xusay in maalinta uu yimid xafiiska, in dowladda Soomaaliya lagu lahaa 100 Milyan oo deyn ah, deyntaasi oo uu ku sheegay inay ahaayeen mushaaraadka ciidanka oo la bixin waayay iyo qandaraasyo shaqsiyaad loo saxiixay.
Sidoo kale ra’iisul wasaaraha ayaa sheegay in lacagtaasi lagu yeeshay dowladihii ka horeeyay, balse labadii sano ee lasoo dhaafay dadaal dheer kadib iyaga ay bixiyeen dhamaan deymahaasi, sida uu hadalka u dhigay.
“Maalintii aan nimid ilaa iyo hadda dowladda majirto cid deyn ku leh, markaan nimid 100 oo deyn ah ayaa lagu lahaa, oo lagu lahaa dowladihii naga horeeyay, kuwaasi oo ah mushaar la bixin waayay ama cid qandaraas la siiyay oo lacagteeda la siin waayay, waxaana bixinay 100 Milyan oo dowladihii hore lagu lahaa oo sidii ay tahay aan loo maamulin” ayuu yiri Ra’iisul Wasaare kheyre.
Khayre ayaa ka hadalkan ka jeediyay kulan uu la qaatay ganacsatada Soomaaliyeed oo uu kala hadlayay sidii loo horumarin lahaa dhaqaalaha dalka iyo bixinta canshuuraha ay bixiyaan ganacsatada Soomaaliyeed.
Kheyre ayaa soo hadal qaaday sharuudaha deyn cafinta Soomaaliya, wuxuuna sheegay inay marayaan meeshii ugu wanaagsaneyd oo looga cafin lahaa deymaha dalalka caalamka ku leeyihiin Soomaaliya.
Muqdisho Oo Lagu Qabtay Tartanka Oradka Gaaban.
Madaxweyne Farmaajo Oo Baaq U Diray Shacabka Muqdisho
Qormo: Maxay Maamulka Puntland ku mucaaradeen Dowlad-gobaleedka Galmudug ?
admin 5th July 2015 27th August 2015
DAAWO:Gabar 4 jir ah oo Askari katirsan ciidanka DF si Arxan daro ah ugaraacay
XOG CULUS: Sheekh Aadan Siiro oo kashifay Nin Cadaan ah oo Hargeysa Ku Nool oo Habeen waliba loo keeno Gabadh Reer hargeysa ah si uu Xumaan ugu Sameeyo+ Ninka Ajnabiga ah oo Fal aan Caad aheyn laga shegay
admin 4th May 2016 4th May 2016